We Fight We Win. -- " More than Media ": ဗုဒဘာသာ တရား တော်များ ကို ဖျက်ဆီး နေသော ဦးပညာဝရ နှင့် ဦးဝီရသူ တို့ တရားခွေများ သတိထားကြပါ။
ဗုဒဘာသာ တရား တော်များ ကို ဖျက်ဆီး နေသော ဦးပညာဝရ နှင့် ဦးဝီရသူ တို့ တရားခွေများ သတိထားကြပါ။
ဗုဒဘာသာကိုဖျက်ဆီးနေသော တရားခွေများ။ ဒီဖုန်းကြီးတွေဟာ ဗုဒဘာသာအမည်ခံထားပေမဲ့
ကျွန်တော့်လက်ထဲကို ခုပဲ ဒီ ခွေ နှစ်ခွေကို အသိတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး လာပေးသွားပါတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်း ဝေပေးဖို့ဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်
အမျိုးဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော တရားတော်များ
အရှင် ၀ီရသူ နှစ်ပါးရဲ့ တရားတွေလို့ ရေးထားပါတယ်
ဓမ္မဒါန ကုသိုလ်ရှင် စေတနာရှင် မိသားစုများလို့ပဲ ပါပါတယ်
ဘယ်သူလှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မပါပါဘူး
နားထောင်ပြီးရင် ဘုရားဟော အဆုံးအမတွေ ပါတဲ့ ရာခိုင်နှူန်းနဲ့
ဘာသာခြား မကောင်းကြောင်းဟောတဲ့ ရာခိုင်းနှူန်း ဘယ်ဟာပိုများလည်း
တစ်ခုခြင်း တင်ပေးပါ့မယ် ကြည့်ရတာ မေမြို့ကိုလည်း
သတ်ပွဲ ဖြတ်ပွဲ ဖြစ်စေချင်တဲ့ မြို့စာရင်း သွင်းထားပုံရတယ်
ဒီခွေ ဒီမှာ ပြန့်နေပြီလား ခုမှ စ ပြန့်တာလား မသိသေးပါ
သင်တထစ်ချပြောနိုင်ရဲ့လား ....ကံ ကံ၏အကျိုးကိုသင်ယုံပါလေ.
..သင်္ကန်းခြုံထားသောဘုန်းကြီးဟာ သိုးရည်ခြုံထားသောဝံပလွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျုပ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.
တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း သံသရာကိုရှောင်ဖို့ နိဗ္ဗါန်ရောက်ကြောင်းတရားနဲ့ စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးစေဖို့.. လောဘမီး ဒေါသမီး မောဟမီးတွေငြိမ်းအေစဖို့
ဟောသင့်ပြောသင့်တာပဲဟောစေချင်ပါတယ်..။တန်ခိုးရှင် ဘုရားတောင်မှ အရာရာကိုမေတ္တာတရား သီးခံခြင်းတရားနဲ့ အနိုင်ယူအောင်မြင်ခဲ့တာပဲ...သင်တို့ဘုရား
သားတော်တွေ လက်ထက်ရောက်မှ ဘုရားသိက္ခာကျရတော့တယ် ..။ဘုရားဟောစေခဲ့သောတရားကိုဟောလို့ တရားနာခဲ့ရသူတွေမှာ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့မှုကိုခံစားရပြီး
မီးအမျိုးမျိုးကိုငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်ပါတယ်..။ သင်တို့လုပ်ကြံဖန်တီးသောတရားများသည်ကား.. ကြားနာရသူအပေါင်းမှာဘီလူးစိတ်ပေါက်ကာ အကောင်းအဆိုး
အမှားအမှန်ခွဲခြား ဆင်ချင်နိုင်တဲ့ အသိတရားပျောက်ခဲ့ရတာ တိရိစ္ဆာန်ကမှ အကြင်နာတရားရှိသေးရဲ့.. သင်နှင့် သင့်နောက်လိုက်တို့သည်ကား...အလွန်စက်စုပ်ဖွယ်
ကောင်သော လုပ်ရပ်တို့ဖြင့်ပျော်မွေ့နေချေပြီ....။တဲပည့်မကောင်းဆရာခေါင်း ဆိုသလို သင်၏တပြည့်နှောက်လိုက်လုပ်ရပ်ဟာ သင့်အပေါ်မှာ များစွာမူတည်နေပါတယ်
တပြည့်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် ဆရာမလုပ်ပါနှင့်...။သင်ဟာစိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ သင်ငြင်းနိုင်လိမ့်မည်မထင်..။သင့်ရဲအငြိုးကြီးလွန်း
တဲ့ စိတ်နောက်ကိုလိုက်ပြီး အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာနောက်ဆုံတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကိုအမှန်တကယ်ပျက်စီးစေခဲ့ပြီဆိုတာသင်မြင်နိုင်လောက်ပါပြီ..။
သင်၏လုပ်ရပ်အကြမ်းဘက်လုပ်ငန်းတွေကြောင့် သင့်ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ခဲ့ပါသလား..? သင့်ရဲ့အမှောင်ဖုံးနေတဲ့ အတ္တစိတ်ရိုင်းတွေကိုမောင်းထုပ်ဖယ်ရှား
နိုင်ဖို့ စစ်မှန်တဲ့တရားရအောင်ရှာပါလေ...။သင့်ကိုယ်သင် အရင်ပြုပြင်ပြီးမှတခြားသူတွေကိုပြင်ဆင်စေပါ..။အိမ်ကြက်ခြင်းအိုးမဲးသုတ်ခွတ်ခိုင်းသလိုနိုင်ငံသားအချင်းချင်း
ပြည်သူအချင်းချင်းသတ်ခိုင်းတာ ကောင်းသလား မကောင်းဘူးလားဆိုတာ သင်လူဆိုလျှင် သိနိုင်ပါတယ်...။သင်တို့ရဲ့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေကျွတ်ကျလာတဲ့တနေ့မှာ
သာသနာကို ခုတုန်းလုပ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မကြည်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံအတွင်း ဘာသာရေးလူမျိုးရေး ပရိပက္ခတွေကိုအသက်သွင်းလို့အကြင်နာတရားကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင် ဖုံးကွယ်မှုတွေလုပ်မဟုတ်မမှန်တာတွေဟောတရားနာပရိတ်သတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး အမုန်းတရားကြီးထွားအောင်ရိုက်သွင်း..ပြဿနာဖြစ်တော့မှဝင်ဖြေရှင်းသလို ကူညီသလိုလုပ်..စိတ်ယုတ်စိတ်ပုတ်ကိုနံ့သာလိမ်း ကြွားလိုက်တာကတော့ဗုဓ္ဒဘာသာ ကျင့်သုံးတော့ဖြင့်သောက်တလွဲ 786ကိုအားကျလို့969ထွင် ဖြုတ်ဦးနောက်လောက်နဲ့ဓမကထိကလုပ်ချင်သေးတယ်....ရှေ့ဆောင်လုပ်ချင်တယ်လည်းပြောသေးတခြားဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လုပ် ရုပ်ကိုက ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားရုပ် ဒင်းကြောင့်ဗုဓ္ဒဘာသာဘုန်းကြီးစ်စစ်တွေ သိက္ခာကျရတာ..အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက် ပြောလည်းသိမယ့်အစားမဟုတ်ဘူး...